Ingxangxasi yangasese Umgxobhozo Isitya sokuxhuba seChannel
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Amanzi ahamba ngeeBhafu zokuhlambela / Ingxangxasi yamanzi Igumbi lokuhlambela Ibhafu Umxhubi Isikwere seChannel
Lo mgangatho uphezulu umpompo wendlu yangasese udibanisa umxube wamanzi obandayo onompompo oshushu. I-MJMS13 yipompo yesinki ethe tyaba kwimodeli yoyilo yangoku. Imowudi yokuhamba kwamanzi engxangxasi yenza intshukumo ethambileyo yamanzi. Akunyanzelekanga ukuba akhathazeke ngamanzi atshabalalayo, aziswa kukuhamba okuqinileyo kwamanzi. Ubekwe ngokubanzi ngaphakathi kwindlu yangasese. I-WOWOW ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona mveliso zikumgangatho ophezulu zetampu yangasese emhlabeni.
● Umgangatho ophezulu Ubhedu: ayinatyala ebantwini, kuba ayizisi izinto ezithandabuzekayo.
● I-Chrome-plated: umxube u-anticorrosive kunye ne-immune ukuyibeka, kwaye uhlala ucacile kwaye kulula ukuhlamba.
● ICartridge yodongwe: ayinamanzi kwaye iyasinda ekufudumaleni nasekuxhathiseni.
● Into eyimfuneko ukuze umntu aphile qete yinyani yokuba umxube awunakhokelo kwaphela.
Ubunzima: 1400 g
Uxinzelelo lwamanzi: ibha ye-3-5
Intshukumo: 7.5 L / min
Imilinganiselo: yonke indawo ephezulu: 175mm
1 x Impompo yamanzi engaphantsi
2 x Ithumbu lamanzi abandayo nelishushu
1 x izixhobo
Ingxangxasi Single Hole Isitya lokuhlambela Faucet Ch ...
Tsala umphezulu we-Spout Gumbi lokuhlambela kwi-Chrome
Brass Basin Umxhubi Taps Gold Khupha Out sisitshizi